Home » သတင်း » GLOOKAST IBC မှာ Dynamic စားသုံးမိဖွင့်မည်
GLOOKAST IBC မှာ Dynamic စားသုံးမိဖွင့်မည်
GLOOKAST, ထုတ်လွှင့်, ဒရာမာထုတ်လုပ်မှု, နှင့်စီးပွားရေးဆက်လက်များအတွက် MXF လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်ထဲမှာဆန်းသစ်တီထွင်မှုသည်ယနေ့အချိန်တွင်တစ် web-based ဖြန့်ဝေစားသုံးမိ interface ကို, Glooport media|producer ၏ပစ်လွှတ်ထုတ်ပြန်ကြေညာ IBC.
Glooport media|producer နှင့်အတူဒါမှမဟုတ်ထုတ်လုပ်မှုအခြေခံအဆောက်အဦများ၏ကျန်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုမရှိဘဲ, ရဝုဏ်အပေါ်မတူကွဲပြား applications များအတွက်, မိုဃ်းတိမ်၌အဖြစ်လယ်ပြင်၌မီဒီယာနှင့်မီတာဒေတာ၏ပြောင်းလဲနေသောစားသုံးမိနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအားလုံးအဓိကဖိုင်-based ပုံစံများကိုအထောက်အပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။
"ကျနော်တို့က IBC မှာ Glooport media|producer စတင်ခံရဖို့ကျေနပ်နေကြတယ်" ဟုဖိလစ်ပီဆန်းတို့, CTO, Glookast commented ။ "ဘယ်နေရာမှာမဆိုအနေဖြင့်လက်ငင်းလွှမ်းခြုံဝယ်လိုအားနဲ့အစဉ်အဆက်-ဖြစ်ပေါ်နေသောမီဒီယာရှုခင်း, ၌, ကြှနျုပျတို့သညျဤဖြေရှင်းချက်အမှန်တကယ်တာရိုးရှင်းတဲ့ပိုကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောနှင့်တန်ဖိုးရှိရှိလုပ်ငန်းစဉ်သို့ထည့်သွင်းသည့်အသွင်ပြောင်းလိမ့်မယ်ယုံကြည်ပါတယ်။ "
ဒီဖြေရှင်းချက်တစ်ဦးချင်းစီ profile များကိုနှင့် session တစ်ခု setting များကိုအတူမျိုးစုံအသုံးပြုသူများကိုထောကျပံ့ပေးနိုငျသညျ။ ဒါဟာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကိုင်တွယ်, ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့် metadata ကိုတည်းဖြတ်နိုင်ပါတယ်အဖြစ်လိုအပ်သော metadata ကို input ကိုပြဋ္ဌာန်း။ တစ်ဦးအပြည့်အဝမလိုအပ်တဲ့ဗိသုကာနှင့်အတူပြုလုပ်ဖြန့်ကျက်အမျိုးအစားကိုက်ညီဖို့စစ်ဆင်ရေးအမျိုးမျိုး Modes သာဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
GLOOKAST7ထံမှ IBC မှာ၎င်း၏တဲ (03.D15) ရက်နေ့တွင် Glooport media|producer သရုပ်ပြပါလိမ့်မည်th 19 မှth စက်တင်ဘာလ။ အစည်းအဝေးတစ်ခုစာအုပ်ဆိုင်စေရန်, ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်ပါ info@glookast.com
2009 စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, GLOOKAST MXF-based ထုတ်လွှင့်, ဒရာမာထုတ်လုပ်မှု, နှင့်စီးပွားရေးဆက်လက် Workflows ပြန်ပြီးအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်ကုန်များ၏ Gloobox နှင့် Glooport မိသားစုသတင်း, အားကစား, archive ကို, ဘေးဥပဒ်ကိုပြန်လည်နာလန်ထူနှင့် Post-ထုတ်လုပ်မှု Workflows ဖြေရှင်းရန် key ကိုစွမ်းရည်အတူတက်မြေပြင်ကနေတီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ မော်ဂျူလာများနှင့်မြင့်မားစိတ်ကြိုက် tools တွေကိုအစုတခုနှင့်အတူ, GLOOKAST စစ်မှန်တဲ့ Multi-format ကိုအကောင်အထည်ဖော်စေသည်, Multi-resolution ကိုတစ်ဦးအဖြစ်မှန် workflows ။ GLOOKAST ထုတ်ကုန်ကျယ်ပြန့်ထုတ်လွှင့်, content တွေကိုထုတ်လုပ်သူများ, တက္ကသိုလ်များ, နှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံ, လက်တင်အမေရိကနှင့်ဥရောပရှိ postproduction အဆောက်အဦအားဖြင့်အသုံးပြုကြသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက: www.glookast.com.
Cantemo Hybrid ကို-မိုဃ်းတိမ်ကိုမီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှု Hub, iconik လွှတ်တင် - နိုဝင်ဘာလ 30, 2017
GLOOKAST IBC မှာ Dynamic စားသုံးမိဖွင့်မည် - စက်တင်ဘာလ 13, 2017
crystal တစ်ဦးနဲ့ Big Four ရုပ်မြင်သံကြားကွန်ယက်၏ Affiliates များအတွက်အဆင့်မြင့် OTT ဖြန့်ကျက်ပြီးဆုံး - မေလ 22, 2017
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2017-09-13
ယခင်: QYOU အသစ်သောမိတ်ဖက်နှင့်ပုံစံများနှင့်အတူအိန္ဒိယအတွက်၎င်း၏အာရုံကိုတိုးပွားစေ
နောက်တစ်ခု: ထုတ်လွှင့်ကြိုးမဲ့စနစ်များကြိုးမဲ့ transmitter ကိုဘက်စုံထုတ်လွှင့်မှုအတွက် 200th အဖြစ်အပျက်ပြီးဆုံး
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "GLOOKAST IBC မှာ Dynamic စားသုံးမိပါကိုဖွင့်" ။ http://www.broadcastbeat.com/glookast-enables-dynamic-ingest-at-ibc/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။